VanaChiremba Vakuru Voratidzira Nenyaya Yekushaya Zvipfeko Zve COVID-19 - HealthTimes
July 16, 2020 July 16, 2020 Cathrine Murombedzi
VANACHIREMBA vakuru vanoshandira muzvipatara zveHurumende, vazivisa kuti vachaisa pasi mapadza ebasa mushure mekunge vamwe vavo vawana utachiona hweCOVID-19 vari pabasa. Mutsamba yavakanyorera mukuru akafanobata chigaro chegurukuta ravanoshandira reUtano Nekurerwa Kwakanaka Kwevana, Muzvinafundo Amos Murwira, musi weChitatu 14 Chikunguru, 2020 vakati tinokuzivisai kuti mukupera kwemazuva gumi nemana, tichaisa tsvimbo dzebasa, mapadza nenhava pasi kana kuchema kwedu kwatadza kunzwikwa. Vakuru vakati mwana asingacheme anofira mubereki.
Na Catherine Murombedzi
Nekuda kwekushaya simba kunomuka mari yemuno yaita musi nezuva, mari yemuno inotambirwa nanamukoti vakuru haichina basa zvachose.
Mari yavanotambira yasiiwa kure kure mumujawo nemitengo, yezvinhu, nemagariro ehupenyu hunechiremera.
Zvokudya uye chii zvacho chavekutengeswa munyika choreva mari yekunze yekuAmerica yeUS$ zvinobva zvaita kuti vakoti vacheme kuna muzvina purazi, kuHurumende.
Hurumende inoziva patakasiira munhaurirwa yatakaita navo tichiti tiwane mugove unochiremera, wekuti tirarameo wa1 Gumiguru, 2018. Mugove waizove mumari yekunze yeUS$. Vanapo patakanyorerana, ngavavhure vatarise ipapo. Tinoti bazi reUtano ngaritidaidze titaure kubva ipapo.
Gamuchirai tsamba iyi nhasi musi weChitatu,14 Chikunguru, 2020, tinokupai svondo mbiri sechiziviso pasi pemutemo weBasa Chikamu 28:01, kune bazi rinokodzera chiziviso chedu chekuti tichange tichiregera basa zvichibva munhunha dzatareva, zvichitsigirwa nezvinotevera.
Vanamukoti vanoda izvi:
● Kuongororwa kweCOVID-19
ngakuitwe muzvipatara zvese kuitira kupa utano hwakakodzera kune munhu wese.
● Ngakuve nezvipfeko zvinodzivirira mushandi ari pabasa kubva mukutapukira zvirwere kunyanya shuramatongo, yeCOVID-19 kana ari basa, zvinonzi pachirungu Personal Protective Equipment (PPE)
● Zvipfeko izvi ngazviwanikwe muzvipatara zvese
● Mari yatinotambira ngaive mari yekunze, US$, iyo isingaperi simba.
Hatidi hedu kutambiriswa mari yemuno zvakare.
● Mari yeUS$ yamuchatipa inofanira kuve yatakatara mugore ra2018 Gumiguru.
● Mupe mugove kune vamwe vedu
vakoti vanobata nesu vari pasi pechikoro chikuru chedzidzo
Che University yeZimbabwe. Iyi
Imari yekubata basa nesu kwavanoita muzvipatara, pachirungu inonzi allowance.
● Ngakuve nemishonga yakakwana, zvekushandisa, nemapadza ese ebasa sezvinokodzera uye zvinotarisirwa nekufanira
● Hatishande tega, tine vanotikotsvera manesi, vanovheneka nemichina, (radiographers) vanoziva mapirwo emishonga (pharmacists) nevese vanoita kuti ndima ireruka muzvipatara avo vakakanda mapadza pasi kare nekuda kwenhunha dzavo dzavakakupirai kuti vadzoke nekuti tinoita muonera pamwe.
“Tikasvika musi wa29 Chikunguru nhunha dzedu dzisina kunzwikwa, isu vanamukoti vakuru hatizokwanise kuramba tichizvitatamura kunge tichadambuka kupa pashoma patange takabatirira muzvipatara zveHurumende, tichati aiwa mapadza pasi.”
#COVID19, BREAKING NEWS, Health News, HealthTimes VernacularVANAMUKOTI VAKURU